Nazi izifundo zothando ongazintshontsha ochungechungeni lwethu lwe-TV oluthandayo - izingcingo ze-teles
Nazi izifundo zothando ontshontsha ochungechungeni lwethu lwe-TV oluthandayo
By brylandobe On Juni 30, 2020
Uthando kwesinye isikhathi lungaba nzima kepha ngenhlanhla singathembela kuma-playoffs ukuthi angasinika izifundo zokuphamba ngaphandle komkhawulo!
Ukuba sothandweni kuvame ukuba injabulo emsulwa. Kulula uma sikulesi simo, siyazulazula futhi siphila impilo yethu engcono kakhulu. Kodwa-ke, akuhlali kusobala futhi kwesinye isikhathi izimpikiswano nokungaqondani kuyabandakanyeka. Noma sithanda enye ingxenye yethu kakhulu, kwesinye isikhathi asisazi okufanele sikwenze ukuthuthukisa isimo noma ukumane sikuqonde. Futhi kuba nzima nangokwedlulele lapho uthande umuntu othile ekusithekeni isikhathi eside. Uma ngabe laba balingisi abachungechunge basinde ezivivinyweni ezimbi kakhulu, uTrendy ukumema ukuthi ubuye ezifundweni zothando lolu chungechunge olusifundise zona. Unganqikazi ukufaka ezinye empilweni yangempela!
Vumela abanye benze amaphutha abo
Kulula ukusho, kunzima kakhulu ukukwenza. Kodwa-ke, kungcono ukukhuthaza omunye futhi umeseke ngakho konke kunokumtshela njalo ukuthi wenza iphutha nokuthi awuvumi. Ngesizini 3 Dawson, uJoey uthandana nomfundi ngenkathi esafunda esikoleni esiphakeme. Ukuthandana kwabo kuqala kwizisekelo eziyinkimbinkimbi selokhu zivela emazweni omabili ahlukene. Ngokwakhe, uPacey useqala ukuzwela imizwa yakhe..
Kepha esikhundleni sokumdumisa nokumgxeka, uyamkhuthaza futhi uzoba ngowokuqala ukuba khona kuye lapho lo mbhangqwana uqeda ukuhlukana. Ngemuva kwalokho, uzokwazi futhi ukunqoba inhliziyo yakhe. Ngamafuphi, i-idyll yakhiwa ngomthamo omuhle wobungane futhi ukusekela enye kungenye yezisekelo zobudlelwano obuphumelelayo.
Injabulo yomunye ngaphezu kwakho konke
Lapho umthanda umuntu, akufanele ube nobugovu futhi uwayeke ajabule noma ngabe lokho kusho ukwamukela ukumbona eshiya. Lokhu yikho kanye okwenzeka kuPyton ekuqaleni kweSchool Brothers Season 4. Ubonile nje ukuthi usathandana noLucas kodwa azi ukuthi uyamthanda uBrooke, uzokwenza konke ukuzama ukubahlanganisa futhi abavumele ukuhlangana.
Ude afike ayithulise imizwa yakhe ukuze angayekethisi udaba lwabo lothando. Umhlatshelo omuhle kakhulu! Ngokuhamba kwesikhathi, uLucas ekugcineni uzobona ukuthi uyathandana noPyton futhi bazoshada futhi ekugcineni kwesizini 6 ochungechungeni. Njengokuthi, uma sinethemba futhi singenandaba, kungakhokha!
UMDLALI we-ROBERTO (I-telenovelas) UGabriel La Madrid, u-Eddy Santana…
Ukubonisa imizwa yakho kuwubufakazi besibindi
Imvamisa, lapho sazi ukuthi sithandana, sesaba ukuyambulela othandekayo wethu. Ngempela, akulula ngaso sonke isikhathi ukusho la mazwi amathathu kothile futhi nangaphezulu uma ungekho ebudlelwaneni nalo muntu. Kodwa-ke, noma ngabe ukuwa kungaba buhlungu, kungadala futhi ukucekelwa phansi kwakho ukuthi kuveze imizwa yayo nayo. Noma ngubani ozama lutho awunalutho njengoba besho. Ngaphandle kwalokho, uLexie Grey wagcina ethatha isibindi sakhe ngezandla zombili ukutshela uMark Sloan ukuthi uyamthanda ngesitatimende abe muhle kakhulu kangangokuba sisazithwele nje usacabanga ngakho. Ukukhishwa okuncane okuvela ku-Grey's Anatomy okwamanje okusakazwa ku-ABC:
" Ngiyakuthanda. Ngikuthanda kakhulu. Futhi nginawe esikhunjeni sami. Kufana nokuthi ukugula. Ngitheleleke kuMark Sloan. Futhi akukho engingakwenza ngaphandle kokuthi ngicabange ngawe, angisakwazi ukulala futhi. Angisakwazi ukuphefumula. Angisakwazi ukudla. Futhi ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda yonke iminithi yansuku zonke futhi ngiyakuthanda. "
Yamukela enye ngokuphelele ngamaphutha kanye nezimfanelo zayo
Akulula ngaso sonke isikhathi ukufika lapho kodwa nokho yisisekelo. Akekho ophelele, noma wena noma othandekayo. Ngakho-ke kufanele sikwemukele ngokuphelele, kubandakanya nengxenye yayo yobumnyama ngoba kumenza abe yilokho ayikho namuhla. Uma uthatha isinqumo sokubhanqana nothile, akufanele uzame ukukushintsha noma ngabe isimo sinzima. Yilokho u-Elena akwazi ukukwenza noDamon kuwo I-Vampire Diaries. Wenza amaphutha! Kodwa-ke, lona wesifazane osemusha ugcina ebhekana nohlangothi lwakhe olungenakuphikiswa, lobugovu nokuziqhenya.
Okungcono kakhulu futhi, wakwazi ukumjabulisa, lowo owayehlupheke kakhulu emlandweni wakhe noKatherine. Ngamafuphi, kwesinye isikhathi kufanele ubhekane namaqiniso: siyabathanda abantu yize benamaphutha noma ngabe ulindele ukuba benze imizamo yokuthuthuka.
Ukwethembeka kuyisihluthulelo sobudlelwano obulinganiselayo
Isikweletu: The Cw
Ukuqamba amanga ngokushesha kuyisithunzi phezu kobuhlobo bothando. Kungcono ukukhuluma iqiniso futhi wakhe umbhangqwana phezu kwezisekelo eziphilile neziqinile. Futhi ungasikholwa, ukwethembana kuyisihluthulelo sobudlelwano obulinganiselayo. Khumbula ukuthi ukuqamba amanga nokumboza okuthile yikhona okucishe kwadla izindleko u-Oliver ubudlelwano bakhe noFelicity kuyo arrow. Ngakho-ke kunokuba amthembe, wakhetha ukumfihlela ukuthi unendodana. Ngeshwa, bekungekhona okokuqala. Ikakhulu selokhu aqhubeka nokwenza ngaphandle kokubonisana naye, ngaphandle kokumbandakanya empilweni yakhe.
Ngakho-ke lona wesifazane osemusha wakhetha ukumshiya kunokuba ayohlala nendoda engakwazi ukuthembeka kuye. Kuyavunywa, u-Oliver wayefunde ukuthembela kuye kuphela kuLian Yu kodwa ngokusobala siyazqonda izizathu zeFelicity. Uma konke kuhamba kahle ohlangothini lothando, sikucebisa ukuthi ubuke uchungechunge lwama-Outer Banks, uchungechunge lweNetflix wonke umuntu akhuluma ngalo.
Lo mbhalo uvele okokuqala ku: https://trendy.letudiant.fr/ces-lecons-d-amour-a-piquer-a-nos-series-tv-preferees-a4805.html
Nawa ama-movie amasha we-Netflix kanye nochungechunge ongazibuka ngoJulayi 2020
isabelomali esiqinile? Nazi izindlela zokupheka ezi-6 ezinempilo, ezilula ezenzelwe izithako ezi-5 nje